Ngokuthenga noma yiphi impahla ekhaya, umthengi ngamunye ivame ukuba ukhethe imodeli kangcono ihlangabezana nezimfuneko ezithile. Ukukhethwa isitofu igesi iyathinteka. abakhiqizi Wanamuhla zasendlini banezeluleko sasivumela ububanzi imikhiqizo, futhi ukuze ulahleke lenqwaba onobuhle ezahlukene, kubalulekile ukulungiselela kusengaphambili. Mayelana kanjani ukukhetha isitofu igesi, ngalokho ukubheka, yiziphi izinzuzo, futhi yini izingozi ezifihliwe kungaba isicupho umthengi Kuzoxoxwa.
Into yokuqala kufanele ucabangele ngaphambi ukhetha isitofu igesi, kuba ubuso bayo. Ngokuvamile, imishini enjalo eyenziwe ngensimbi ukushisa ukumelana high, ukuba ubuye ukumelana zonke izinhlobo ukugqwala. I enamathela nakho kungase zihluke kakhulu, isibonelo, izinto ezivame kakhulu i-ungqimba engenhla ezibhekwa koqweqwe lwawo bendabuko kanye insimbi engagqwali, kodwa muva nje kuyanda ngaphezulu kanye amapuleti ngaphezulu camera nge ingilazi noma ingilazi-Ceramic.
Classic kakhulu futhi kungase kutholakale kodwa amapuleti eyigugu. Basuke izimpawu yisikhuthazo kuqhathaniswa eliphezulu futhi kungenziwa ababethi noma yimuphi umbala. Kodwa, ngeshwa, surface enjalo kunzima ukulondoloza zisesimweni ephelele, njengoba ukuhlanza kubo kusukela amafutha namanzi wokushiswa kuyadingeka ukuba asebenze ngokuzikhandla, futhi ekugcineni Ufika emibi. Futhi, koqweqwe lwawo kungaba ngiwunqamule ngephutha. Sales umholi namuhla phakathi igesi isitofu nge ebusweni koqweqwe lwawo zedivayisi ekhiqizwa e-Italy Candy CGG56TB (cishe u- $ 250).
Plates ngensimbi engagqwali ebusweni futhi bemthanda emizi yesimanje. Zingaba kokubili matte futhi yona-iphucuziwe. Lezi units sibonga kukhanga ingqondo yabo stylish, ukuqina okusezingeni eliphezulu futhi kalula yokuhlanza. Kodwa, ngaphambi kanjani ukukhetha isitofu igesi nge enamathela ezinjalo, kubalulekile ukuba Thenga kakhulu izinzwa oluqinile, njengoba bambulala njalo ahlale yeminwe, okumele njalo zisuswe. Ngaphezu kwalokho, insimbi engagqwali lidinga ejenti ukunakekelwa okukhethekile. Ethandwa kakhulu phakathi abathengi ujabulele Ardo A 5540 G6 inox (cishe u- $ 400) futhi Kaiser HGG 50511 MW (mayelana 435 $).
Ukuze uthole emizi zanamuhla yilezi ipuleti ephelele nge enamathela eyenziwe ingilazi-Ceramic. Ngaphambi ukhetha cooker igesi yalolu hlobo kufanele ngokushesha tune emkhosini ngokucophelela ukuhlanzeka imishini. Ngomqondo onabile, inkulumo impahla ikhange ngempela ngifuna, ephezulu amandla, uletha ezihlukahlukene ezinkulu ngaphansi kwamazinga okushisa ukucindezeleka mechanical, kulula ukuhlanza, kodwa uma ungasusi ngokushesha kwamanzi ukungcoliswa, ikakhulukazi uma Ukwakheka has a ushukela noma efanayo ukudla okuqinile, okungukuthi, ematfuba umonakalo ebalulekile . Phakathi nalesi sigaba igesi izitofu izimfanelo ezinhle kuqokonyiswa Kaiser izindaba umkhiqizi, okungukuthi HGG 61511 MR ($ 625) futhi HGG 64521 MKR ($ 660).
Indlela ukukhetha isitofu igesi kungenzeka ukusekela kanye consultants yokuthengisa ezitolo ekhaya Imishini. Zeluleka ukuba banake inombolo kanye nomthamo ezivuthayo. endzaweni lephephile yamanje, ngokuvamile kufanele imisebenzi eyengeziwe, ezifana gas-kagesi ukuthungela ukulawula nezithuthukisi nokuvikeleka art. Ngokuvamile obalulekile Ukukhetha umbandela ngenxa yamabandla nabo kuhhavini. Manje igesi izitofu abakhiqizi olungasihlomisela imikhiqizo yabo kokubili igesi futhi kuhhavini kagesi. ukudla Warm ubuchwepheshe kubo Yiqiniso, ihluke nomunye, enikeza abathengi kukhethwa umuntu. grills abahlukahlukene, abalandeli akhethekile izitofu yakhelwe ukudala izimo ezikahle kakhulu ukupheka.
Itshwayo izingalo Bryansk. Ijazi elisha izingalo amaphutha ubudala
Elithi: umsuka, incazelo kanye izici
Prank - kuyini? izinhlobo Prank, Prank Russian ikakhulukazi